DHAGEYSO:Ciidamo hor leh oo la geeyay magaalada Afmadow. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Ciidamo hor leh oo la geeyay magaalada Afmadow.
Wararka ka imanaya magaalada Afmadow ee gobolka Jubada hoose dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi la geeyay ciidamo dheeraad ah oo qayb ka noqonaya howlgalada ka dhanka ah Ururuka AL-shabaab ee gobolada Jubooyin lagu wado inay ka bilowdaan.
Wararka saaka ka imanaya degmada Afmadow ayaa sheegaya in ciidamadaan oo aad u hubaysan ay dhaqdhaqaaqyo Milatari ka bilaabeen magaaladaasi iyo deegaanada Hoose yimaada.
Xooggag Al-shabaab ayaa waxay gacanta ku hayaan deegaanada ugu badan ee gobolada Jubada Hoose iyo jubada dhexe maamulka Jubaland ayaana dhowr mar oo hore sheegay inay goboladaas ka bilaabayaan howlgalo shabaabka looga saarayo deegaanada ay ku sugan yihiin si la isugu furo degmooyinka kala go’doonsan.
Taliyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay ciidamada howlgalkaan fulinaya ayaa sheegay in qorshohooda ugu weyn uu yahay sidii ay AL-shabaab ugu saari lahaayeen deegaano badan oo ay kaga sugan yihiin gobolada Jubada Hoose,Jubada dhexe iyo Gedo.
Taliyaha ayaa shacabka deegaanka ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada Ammaanka ee howlgalada ku jira,wuxuu intaasi raaciyay in howlgalkaan uu noqon doono kii ugu danbeeyay ee xooggag shabaabka looga saarayo dhamaan goboladaasi.
Gobolka Jubada dhexe ee ay ku Taalo caasimada Rasmiga ah maamulka Jubaland ee magaalada Bu’aale ayaa waxaa gabi ahaanba gacanta ku haya xoogga AL-shabaab sidoo kale waxay shabaabku maamulaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada Jubada hoose iyo Gedo,waxaana dhowr mar oo hore goboladaas ka dhacay dagaalo u dhexeeyay ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo xooggaga AL-shabaab wallow aan wali lagu guulaysan in gabi ahaanba gacan ku haynta goboladaas AL-shabaab laga saaro.
← Qaramada Midobay oo ka hadashay eryida ergaygii Soomaaliya u joogay.
Dowladda oo maanta soo bandhigi doonto manhajka cusub ee waxbarashada →